DVB - Ven, 20/05/2022 - 3:52pm
မြိုင်အခြေစိုက် ဂဠုန်ပြောက်ကျားတပ်ဖွဲ့ရဲ့ တိုက်ခိုက်ရေးတာဝန်ခံ ဗိုလ်ဇေယျာက“စစ်(…)တွေနဲ့ ပျူစောထီးတွေက မနေ့က မနက်ပိုင်းမှာ မြိုင်မြို့နယ်တောင်ပိုင်း ပန်တိုင်းတောရွာကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာ။ ပြည်သူတွေရဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ခိုးယူပြီး တွင်းမရွာဘက်ကို ဆုတ်သွားကြတာဗျ။ အဲဒီပျူစောထီးအားကောင်းတဲ့ တွင်းမရွာကို ည ၉ နာရီခွဲလောက်မှာ ဒေသကာကွယ်ရေး ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ စစ်ကောင်စီဘက်က ၃ ယောက်သေဆုံးပြီး အများအပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်”လို့ ပြောပါတယ်။
တိုက်ပွဲမှာဂဠုန်ပြောက်ကျားတပ်ဖွဲ့၊ ကျေးလက်ဒေသပြောက်ကျားတပ်ဖွဲ့(မြိုင်)၊ PUGF၊ မြိုင်PDF၊ ဂျိုင်းကြားလက်နက်ကြီးတပ်ဖွဲ့၊ ငဘလက်နက်ကြီးတပ်ဖွဲ့၊ နံ့သာမြိုင်လက်နက်ကြီးတပ်ဖွဲ့၊ မြိုင် Warriors၊ တမာမြေ ပြောက်ကျားတပ်ဖွဲ့၊ ဝံပုလွေပြောက်ကျားတပ်ဖွဲ့၊ မဟူရာအလင်းတန်းပြောက်ကျားတပ်ဖွဲ့၊ PPDF၊ PKUN PDF ၊ EPDF နဲ့ N-YSO ပြောက်ကျားတပ်ဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းပြီး တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာပါ။
အဆိုပါတိုက်ပွဲမှာ စစ်ကောင်စီဘက်က ထိခိုက်သေဆုံးတာနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ သတင်းထုတ်ပြန်ထားတာ မတွေ့ရသေးပါဘူး။
DVB - Ven, 20/05/2022 - 3:19pm
“ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူတိုင်းအတွက် စားနပ်ရိက္ခာ အလုံအလောက်ရှိပါတယ်။ ပြဿနာက ဖြန့်ဖြူးရေးဖြစ်ပြီး ဒါဟာ ယူကရိန်းစစ်ပွဲနဲ့ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ဆက်စပ်နေပါတယ်” လို့ ဂူတာရက်စ်က မေ ၁၉ ရက်မှာ လုံခြုံရေးကောင်စီကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
DVB - Ven, 20/05/2022 - 3:11pm
DVB - Ven, 20/05/2022 - 3:06pm
မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့နယ်နဲ့ ပေါင်မြို့နယ်တို့မှာ မေလ ၂၀ ရက် နေ့လယ်ပိုင်းက မုန်တိုင်း ဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက် နေအိမ်တွေ အဆောက်အအုံတွေ ပြိုကျပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေက ပြောပါတယ်။
လေပြင်းမုန်တိုင်းကြောင့် မော်လမြိုင်ရဲ့ သာယာအေးနဲ့ ဇေယျာသီရီရပ်ကွက်တို့မှာ လူနေအိမ် ၁၀ လုံးထက်မနည်း ပြိုကျပျက်စီးခဲ့သလို ပေါင်မြို့နယ်မှာ လူနေအိမ်တွေ၊ ဈေးဆိုင်ခန်းတွေနဲ့ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း အုတ်နံရံ ပြိုကျ ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မော်လမြိုင်မြို့ တောင်ဝိုင်းရပ်မှာလည်း လျှပ်စစ်ဓာတ်မီးတိုင် ၁၀ တိုင်ထက်မနည်း လဲကျပျက်စီးခဲ့သလို ဈေးဆိုင်ခန်းတချို့နဲ့ အဆောက်အအုံ အမိုးလန်တာတွေလည်း ရှိပါတယ်။
မုန်တိုင်းကြောင့် လူနေအိမ်ပျက်စီးသွားတဲ့ မော်လမြိုင်မြို့က ဒေသခံပြည်သူ ၆၀ ကျော်ကို လတ်တလောမှာ သယာအေးဝဲကြီးကွေ့ ဓမ္မာရုံကို အရေးပေါ် ရွှေ့ပြောင်းထားတယ်လို့ လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူက ပြောပါတယ်။
မိုးဇလဌာကတော့ မော်လမြိုင်မြို့ကို ဦးတည်ပြီး ဝင်ရောက်နေတဲ့ မုန်တိုင်းငယ်ကို မေလ ၂၀ ရက်နေ့ ညနေ ၄ နာရီခွဲအချိန်မှ အနီရောင်အဆင့်ကနေ အညိုအဆင့် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
မုန်တိုင်းငယ် အရှိန်ကြောင့် မွန်ပြည်နယ်ရဲ့ မော်လမြိုင်၊ချောင်းဆုံ၊ ကျိုက်မရော၊ ပေါင်၊ မုဒုံ၊ သံဖြူဇရပ်နဲ့ ရေးမြို့နယ်တို့မှာ သစ်ပင်ကြီးတွေနဲ့ ဓာတ်မီးတိုင်တွေ လဲကျပျက်စီးတာတွေ ရှိနေသလို လမ်းပိတ်ဆို့မှုတွေလည်း ဖြစ်ပေါ်နေတာပါ။
Irrawaddy - Ven, 20/05/2022 - 2:54pm
Regime forces are stepping up attacks on the resistance strong-hold of Magwe Region.
The post Eight Magwe Civilians Killed in Myanmar Junta Raids appeared first on The Irrawaddy.
DVB - Ven, 20/05/2022 - 2:03pm
ပြန်လွတ်လာသူတဦးက “ရွာက ကျနော်တို့ ၅ ယောက်ကို ခေါ်သွားတုန်းက အသတ်ခံရတဲ့ ပျူအလောင်းတွေကို သယ်ဖို့သက်သက်ပဲ။ နောက် အလောင်းတွေကို အုတ်ဖိုဆေးရုံကို သယ်ပြီးတော့ သူတို့ ၅ ယောက်ကို စစ်ကောင်စီတပ်တွေက မေးခွန်းတွေမေးပြီး တယောက်ချင်းစီ ခွဲပြီးစစ်တယ်။ နောက် ၄ ယောက်ကို ပြန်လွှတ်ပေးပြီး တယောက်ကို ဖမ်းထားလိုက်တာ။ သူက ရွာထဲက နာမည်ထွက်နေတဲ့ သူတွေနဲ့ အမျိုးတော်နေတာမလို့ ဆိုပြီး ပြန်မလွှတ်တာ” လို့ ပြောပါတယ်။
DVB - Ven, 20/05/2022 - 2:01pm
ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ၃ ယောက်သေဆုံးပြီး ၁ ယောက်ကတော့ ဒဏ်ရာပြင်းထန်ရသွားတယ်လို့ 27 Revolution Force(MGN) ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ပစ်ခတ်မှုမှာ သေဆုံး ဒဏ်ရာရသွားသူတွေဟာ ပျူစောထီးအဖွဲ့ဝင်တွေဟုတ်မဟုတ်တော့ သီးခြား အတည်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါဘူး။
DVB - Ven, 20/05/2022 - 1:56pm
Irrawaddy - Ven, 20/05/2022 - 1:35pm
The powerful ethnic armed organization was responding to the regime spokesperson’s warning of possible future conflict in Rakhine State.
The post Myanmar Junta’s Threat of Fighting Dismissed as ‘Naked Joke’ by Arakan Army appeared first on The Irrawaddy.
Irrawaddy - Ven, 20/05/2022 - 12:07pm
The post Myanmar Junta Chief Meets Ethnic Shan Leader for Peace Talks appeared first on The Irrawaddy.
Irrawaddy - Ven, 20/05/2022 - 11:16am
Regime troops are rounding up civilians with alleged links to the Arakan Army.
The post Myanmar Junta Risks War in Rakhine State with Civilian Arrests appeared first on The Irrawaddy.
Irrawaddy - Ven, 20/05/2022 - 11:10am
The battle for Thay Baw Boe camp was another victory for the ethnic Karen fighters who have overrun several army camps in Karen State since last year.
The post Deputy Commander Killed as KNLA Seize Strategic Army Base in Southeast Myanmar appeared first on The Irrawaddy.
Irrawaddy - Ven, 20/05/2022 - 7:25am
The post Myanmar Junta Threatens to Downgrade Australia Ties Over Snub appeared first on The Irrawaddy.
Myanmar News Net - Gio, 19/05/2022 - 10:06pm
Inanormal year, rain clouds would beawelcome sight for Myanmar farmers at the start of the growing season, but for Khaw Mying and thousands of other agricultural workers in the country,
Myanmar News Net - Gio, 19/05/2022 - 8:21pm
IOM has welcomed the report, produced by its partne
Myanmar News Net - Gio, 19/05/2022 - 8:18pm
New York [US], May 19 (ANI): Union Minister of State for External Affairs V Muraleedharan on Thursday highlighted the adverse impact of the ongoing Russia-Ukraine war on the developing world, and called fora"global collective action" to address the looming food crisis as well as economic decline. MoS Muraleedharan was speaking at the United Nations Security Council (UNSC) open debate on 'Maintenance of International Pea
Democratic Voice of Burma - Gio, 19/05/2022 - 7:19pm
Democratic Voice of Burma - Gio, 19/05/2022 - 6:55pm
Democratic Voice of Burma - Gio, 19/05/2022 - 6:27pm
Myanmar News Net - Gio, 19/05/2022 - 6:05pm
YANGON, May 19 (Xinhua) -- Myanmar health authorities received more COVID-19 vaccine syringes donated by China at the Yangon international airport on Thursday, said the state-run television channel MRTV.
More vaccines and syringes will arrive at Myanmar on May 28 and 29, said the Ministry